Broccoli marevaka: Ity ve no anaran'ny Ubuntu 18.04? | Avy amin'ny Linux
Samy nanontany tena izahay rehetra hoe inona no hitranga rehefa lany anarana izy (ny kaody na lakile) a Ubuntu, na amin'ny famitana ny abidia, toy ny biby atahorana ho lany tamingana, ary avy amin'ny bilaogin'i Ostatic.com tonga amintsika ny valiny.
Ity vaovao ity dia tsy misy ifandraisany, ankoatr'izay, tsy fantatra raha azo antoka izay hitranga ao aoriana, fa farafaharatsiny nampihomehy ahy izany.
Benjamin Drung nanondro izy fa ho lany ny abidia Ubuntu amin'ny andiany 17.04 miaraka amin'ilay taratasy Z, ary ilaina ny manapa-kevitra raha hanomboka amin'ny A. Taloha UDS, Mark Shuttleworth Nihomehy izy nilaza fa hampiasa legioma avy eo rehefa lany ny safidy ary manome ny kaody Broccoli marevaka for Ubuntu 18.04 LTS.
Mandehana ary ianao Shuttleworth. Tena mampihomehy ahy raha izy ireo no naka ny anaran'ny legioma Ubuntu, ary heveriko fa Debian tsy maintsy hanao zavatra mitovy amin'izany (angamba maka anaran-tsiranoka na lovia) rehefa lany endri-tsoratra ianao Toy Story.. Inona ny hevitrao? 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Broccoli marevaka: Ity ve no anaran'ny Ubuntu 18.04?
Fa raha manomboka amin'ny A izy ireo, tsy midika zavatra hafa toa an'i Almond Mahagaga ve izany? xD
Mamaly ny tenako aho ary miaraka amin'izay dia manolotra an'i Amazing Almond ho an'ny kinova 17.10 aho, rehefa vitan'izy ireo ny abidia 😛
Eny, mety hampihomehy izany amin'ny anaran'ny legioma.
Mbola manana sarimihetsika sisa i Debian:
Little Ant (Antz), The Little Mermaid, The Lion King, Snow White, sns. Na izany na tsy izany, misy anarana mandritra ny fotoana fohy, ha
Hahaha, alao sary an-tsaina ny tenanao miaraka amin'ilay sarimihetsika fotsy fotsy:
Debian tsy marin-toerana moana
Masiaka ny fitsapana an'i Debian
Debian stable saro-kenatra
Debian taloha fatoriana maharitra
Inona no anarana matotra XD
Tao amin'ny tranonkala mahatsikaiky iray dia nilaza izy ireo fa ny anaran'ilay 13.10 dia ny hoe "Sexy Shuttleworth"
mety ho Berry mankaleo koa
Fotoana vitsy lasa izay, ny fifanakalozan-kevitra iray amin'ny iray amin'ireo lisitr'i Fedora momba ny hoe tsy ho any amin'ny helo miaraka amin'ireo anarana mampihomehy sy "mampihomehy" izy ireo ary raha tsiahivina fa Spherical Cow no ho farany amin'ity andalana ity.
Ho an'ny 18.04 Ubuntu dia ho rafitra fiasa faharoa be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao aorian'ny Windows ho an'ny desktops, mpizara ary karazan-tsakafo rehetra, ka toa hitako fa hisafidy zavatra matotra kokoa izy ireo izay manondro ny maha-zava-dehibe ny rafitra fiasan'ny Canonical.
Nifidy ny Fedora 19 ihany koa izy ireo, hantsoina hoe Schrödinger's Cat, izay efa namoaka ny Beta an'ny Fedora 19 ...
Nuuh, tsara, notsofina ny saiko! Manantena aho fa toy ny lazain'i @anti fa tsara be ny mahita famoahana misy ireo anarana ireo !!
Amena !! hehe ..
Mihoatra noho ny anarana tsy dia matotra loatra, amiko dia toa mandeha amin'ny anarana mifandraika amin'ny siansa ary indrindra ny fizika i Fedora. Te-hahita zavatra toa izany aho Heisenberg ny tsy fahazoana antoka na zavatra tahaka izany.
Amin'ny fotoana ahatongavany amin'ny "M" dia efa manana ny anarana hoe: Moringa Mahafinaritra aho!
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA, Kuba ihany no mahatakatra ny vazivazy JAJAJAJAJA
Vao azoko io. Afaka mifoka sigara ve ianao?
Jereo, miaraka amin'ny kernel napetrak'izy ireo tao amin'ny LTS farany, tsara kokoa noho ny iray izay napetrany «Dunga Dunga»….
Ahoana ny amin'ny kernel an'ny LTS?
Mampivarahontsana ny fitantanana herinaratra, tsy nijanona tamin'ny 12.04 mihitsy ny mpakafy solosaina finday ary naharitra gazy ny bateria. Tena manontany ahy ianao hoe inona no mahadiso ny kernel sa ny fanaovana trolling?
Tsy mbola nanana olana tamin'ny milina nametrahako azy aho, jereo ny fitaovanao.
Tsy fantatro hoe firy ny isan-karazany takian'ny mpampiasa, dia narahako kinova 4 tamim-pahalianana ary avy eo very ny hafanam-poko.
chepecarlos dia hoy izy:
Raha tena mampihomehy: D, angamba ampiasao ny anaran'ny voankazo
Mamaly an'i chepecarlos
Nokia Eto misy amin'ny iOS